ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 152
မောင်စံ (တောင်ငူ) ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ ဖလော်ရီဒါ ကနေ ဆန်ဖရန်ကို ပျံသန်းရတဲ့ခရီး မနီးလှပါ။ စာမရေးဖြစ်တာကြာပြီ၊ မအားဘူးဆိုပြီး ပြစရာအကြောင်းကလည်းမရှိ၊ အဓိက ကတော့ Mood မဝင်တာပါ လေ။ စာမူတောင်းထားသူတွေက လောဆော်နေပြီ၊ မပြီးသေးဘူးလား၊ မရသေးဘူးလားပေါ့။ အင်း.. ခက်တာက ခေါင်း ထဲကို ဘာအကြောင်းအရာမှ ပေါ်မလာ။ “ထွက်စမ်းဟဲ့.. ထွက်စမ်းဟဲ့…” “ဒုန်း.. ဒုန်း.. ဒုန်း” “Oh! What happen to you baby?” “Amm.. nothing nothing.. I am OK” ရေးစရာလေးများ တစ်ပိုင်းတစ်စ ထွက်လာမလားလို့ ဖြစ်ညှစ်စိတ်ကူးပြီး လေယာဉ်ပြူတင်းပေါက်ကို သတိလက်လွတ် ခေါင်းနဲ့တိုက် လိုက်တာ ကိုယ့်ဘေးမှာအိပ်မောကျနေတဲ့...
မာမာအေး ဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါရှင်၊ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေးကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကေါင်းတေါင်းလိုက်ပါတယ်၊ သောတရှင်တို့ရေ၊ ဒီကနေ့ မာအေးမကြုံဖူးသေးတဲ့ စာသဘင်အခန်းအနားတခုအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်၊ အဲဒါကြောင့် “ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံ” ဆိုစကားအရ-“ ရေးတော့ ရွှေအမြုတေ- ဖတ်တော့-ရွှေအမတေ” လို့ခေါ်ရမယ့် ရွှေအမြုတေ- စာပေဆုပေးပွဲအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်၊ ဒီရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုသူကတော့- စာပေလောကအခေါ် ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း- လူအပေါင်းက သိကြပါတယ်၊ အနုပညာသမားတို့ရဲ့သဘာဝ၊ ချစ်သူလဲရှိ မုန်းသူလဲရှိနေမယ့်သူဖြစ်မှာပါဘဲ၊ မာအေးကတော့ ကိုဝင်းငြိ်မ်းတို့အဖေ၊ လက်ဝှေ့ကျော် ကျားဘငြိမ်းသံယောဇဉ်နဲ့ အကြောင်းခံပြီး ခင်မင်နေတာပါ၊ မာအေးငယ်က ယောက်ျားမလို့ပြောခဲ့တာဘဲ၊ အားကစားဟာ ကိုယ့်ဝါသနာထဲမှာ ပါပြီးသား၊ မိန်းခလေးမို့ လက်ဝှေ့လိုင်းတော့ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့၊ လက်ဝှေ့ပွဲဆို ဗမာလိုထိုးထိုး၊ နိုင်ငံတကါလိုထိုးထိုး-...
တက္ကသိုလ် ရွှေရီဝင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ သူငယ်တန်းကလေးများနားလည်နိုင်သော စကားလုံးကိုသာသုံး၍ ဇာတ်လမ်းဖြစ်အောင် ရေးနိုင် သူ၊ လွယ်ကူသော စကားလုံးများနှင့် နက်နဲသောအတွေးအခေါ်များကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်သူ ကာတွန်းဆရာ ကြီးအကြောင်း ………… တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော့်ဖခင်က …… ‘သား၊ ဒေါက်တာစူးနဲ့တွေ့ချင်ရင် ဖေဖေနဲ့လိုက်ခဲ့၊ ဒီကနေ့သူ့ကို ဖေဖေလေဆိပ်သွားပို့စရာရှိတယ်’ ဟုပြောလာပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ပျော်လွန်းသဖြင့် ‘တကယ့်ဒေါက်တာစူး (Dr. Seuss) ကို ပြောတာနော်’ ဟု တက် ကြွစွာ မေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ကလေးပုံပြင်ရေးသား၍ ကာတွန်းပါရေးဆွဲသော ဒေါက်တာစူး၏ စာဖတ်ပရိတ် သတ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဖခင်မှာ ဒေါက်တာစူး၏ စာအုပ်များထုတ်ဝေသော ရမ်တန် ဟောက်စ် Random House...
အရှင်ဇ၀န (နုိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ အထူးသဖြင့် ရွှေပြည်သာသား တစ်ယောက်အတွက် သိလိုသော အဖြေက ပိုလွယ်နေတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ဒညင်းကုန်း လမ်းဆုံ၊ ခရေပင် လမ်းခွဲ၊ နောက် ထောက်ကြံ့ဘက် ဦးတည်မှု။ အခု ဘုရားဆီမှ လွင့်ပျံလာသည်မှာ သိလိုသော အဖြေကို ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစွပ်ကြီးနှင့် ခေါ်လာစဉ်က အခန်းကျဉ်းလေးထဲ မထည့်မှီတိုင်ကို ငါးပတ်လောက် ပတ်ခိုင်းသည်။ ပြီး ခေါင်းငုံ့ ခေါင်းငုံ့ဟု ခိုင်းပြန်သည်။ တိုက်မိစရာ တခုခု ရှိနေ၍ ငုံ့ခိုင်းသည်ဟု ထင်သည်။ ထိုအထင်က ခေါင်းကို ငုံ့ပြီးသား ဖြစ်စေသည်။ ကျော် ကျော် ဟု ခိုင်းပြန်သည်။ ခြေထောက်က မ ပြီးသား။ အခန်းထဲ တနာရီလောက် ထားပြီး...
အရှင်ဇ၀န (နုိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ဘဝမှာ ရောက်ရမည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ တွေးထင်မထားသော အရပ်၊ ဤအရပ် ဤဒေသကို လူတွေက လောကငရဲဟု သတ်မှတ်ထားကြသည်။ အသိမိတ်ဆွေများနှင့် ဝေးကွာနေရသည်။ လုပ်ငန်းအားလုံး ရပ်တန့်ထားလိုက်ရပြီ။ နှစ်ဘယ်လောက် ကြာကြာ ဝေးရမည် မသိသေး။ ဒါတွေကို တွေးမိလျှင် တော်တော် ကြေကွဲစရာကောင်းနေသည်။ ငရဲမီးက ဘယ်လောက်ပူသည် မသိ။ သောကမီးကတော့ ရင်ထဲကို အတော် လောင်မြိုက်နေသည်။ ဤအတွေးတွေနှင့် တဆက်တည်း ငါတို့ အနစ်နာခံနေရတာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် နည်းနည်းလေးမှ မပါ။ ပွဲပြီးလျင် အားလုံး ပျော်စရာတွေ ထွေးပိုက်ရမည်။ အားလုံးအတွက် ခံပေးရတာ ကျေနပ်စရာပဲ ဖြစ်သည်။ အများအကျိုး ဆောင်ရွက်ရခြင်းဟာ ဘုရားအလောင်းတွေ လုပ်ခဲ့သော...
ငြိမ်းချမ်းအေး ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ လူအုပ်စု အလိုက် ပုံသေ ကားချပ်ချ ကောက်ချက်ဆွဲမှုမျိုးဟာ မလိုလားအပ်ပေမယ့် ယေဘုယျ သဘော ဆိုရရင် ဗမာ့လူမှုအသိုင်းအဝန်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဟာ တည်ငြိမ်အေးဆေး ငြိမ်းချမ်းကြတယ်။ မြို့တမြို့ မှာ ခရစ်ယာန်ထဲက ခပ်စွာစွာ၊ ခပ်ထောင်ထောင် ဆိုတာမျိုးက ရှားတယ်လို့ ထင်တယ်။ စီးပွားအရာမှာလည်း ခြွင်းချက် ဥပမာ ပြုစရာတွေ အများကြီး ရှိသော်ငြားလည်း ဗမာခရစ်ယာန်များဟာ ထဲထဲဝင်ဝင် မြင်သာထင်သာ လွှမ်းမိုးနေမှုမျိုး မရှိသလောက်ပဲ။ ဗမာခရစ်ယာန်အများစု ဟာ ရပ်ထဲရွာထဲမှာ အရာရာမှာ သာမန် သူလို ကိုယ်လို အနေအထားနဲ့ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်ပဲ နေထိုင်ကြတာ များတယ်။ ကလေးဘဝ က အမေ နဲ့ လည်လည်သွားမယ်၊ ကြွယ်ကြွယ် တို့...
အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၃ ဘဝထဲက မလိုချင်သော နေ့ရက်များကို နုတ်ပစ်ပါဆိုလျှင် အခုပြောမည့်နေ့ရက်များကို ပယ်ထုတ်ပစ်မည်မှာ အသေအချာ။ သို့သော်လည်း ဘယ်လိုဖျက်ဖျက် မပျက်နိုင်သော နေ့ရက်များကို ပြောပါဆိုလျှင်လည်း ယခု ပြောမည့် နေ့ရက်များကိုသာ ရွေးထုတ်ပြရတော့မည်။ ထိုရက်ကား ၁၉၉၃ ခု၏ မိုးကာလ နေ့ရက်များပင်။ ပို၍ တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် ၉၃ သြဂုတ် (၇) ရက်၊ ဒဏ်ရာတို့၏ နိဒါန်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၏ တံခါးဝ၊ ဤသို့ သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သော အနက်ရောင်ကာလ။ အစမှဆုံး သည့် အချိန်အထိ အိပ်မောကျနေလျှင်လည်း အကောင်းသား။ အခုတော့ နိုးလျှက် အိပ်မက်ဆိုးကြီးကို မက်နေရသည်။ အခန်းထဲကို စရောက်တော့ လေးယောက်သား ရေငတ်ခဲ့ရသော ဒုက္ခကို...
မြန်မာပြည် ပညာရေးအတွက် နိုင်ငံခြားစာအုပ်စာပေများ ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃ ပညာလိုလားသူများ၊ ဗဟုသုတလိုလားသူများအတွက် ပညာရွှေအိုးလူမခိုး ဆိုသောစကားမှာ စာအုပ်စာပေများကိုဆိုလိုပါသည်။ အိမ်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ရာတွင် အလွန်လေးလံသော စက္ကူပုန်းများမှာ ပညာ (စာအုပ်များ) ထည့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ဆိုင်များမှ စာအုပ်များ မွှေနှောက်ဝယ်ယူထားသဖြင့် စုဆောင်းရရှိထားသော စာအုပ်များသည် အိမ်ပြောင်းသောအခါ သယ်ရရွှေ့ရသည်မှာ လေးလံလှပါသည်။ ပညာဆိုသည်မှာ လေးလံလှပါသည်။ ယခုအခါတွင် ကမ္ဘာ့ပညာရပ်များကို အင်တာနက်တွင် အီးဘွတ် eBook များအဖြစ် သိုမည်းထားသဖြင့် လေးလေးလံလံ မရှိတော့ပါ။ သို့သော် အခြားသူအတွက်တော့မသိ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်မူ စာအုပ်များသာလျှင် ဖတ်ရသည်မှာ လေးလေးပင်ပင်ရှိသည်။ နောက်တစ်ခု ရှာရသည်မှာလည်း လွယ်ကူပါသည်။ အချက်အလက်များကို အင်တာနက် ဂူဂယ်၊...
၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံကစလို့ … မန်ဒဲလား သေသွားတဲ့နေ့အထိ ကေသွယ် ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃ ဖေဖေရေ . . . ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လဆန်းတုန်းက မထင်မှတ်ပဲ သမီး ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ခရီးစဉ်ပွဲ လေး တခုအကြောင်းကို ပြန်ရောက်ကတည်းက ဖေဖေ့ကို ပြောပြချင်နေခဲ့တာ။ ထုံးစံ အတိုင်း ဟိုလုပ် ဒီလုပ် နဲ့ နောက်ဆုံးပတ် ရောက်မှပဲ ၊ စာရေးဖြစ်တော့တယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီပွဲမှာ သမီးက ဘာမှ တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်မူတော့ မရှိပါဘူး။ သမီးရဲ့ ဆရာက မြန်မာပြည်ကနေ ဖိတ်ထားတဲ့ ဧည့်သည် သုံးယောက်အတွက် လာပြီး...
Sea Game 2013 သုံးသပ်ချက် ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း ၂၀၁၃ ပြီးတော့မဲ့အချိန်မှာ မြန်မာများအတွက် အလွန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့် သင်ခန်းစာများစွာ ရရှိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ထက် အရှေ့တောင်အာရှအဆင့်ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာာ လေ့လာသုံးသပ်ပါမယ်။ ● အားသားသော အချက်ကောင်းများ ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပဲ စတင်ရရင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူပဒေသာ၊ ကွန်ပြူတာနည်းပညာများနဲ့ အခြားနိုင်ငံများနဲ့တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ရာဇဝင်ကိုလည်း ကမ္ဘာကိုတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ ခေတ်မီအားကစားကွင်းကြီးများကို နေပြည်တော်မှာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း၄၀၀ အကုန်ခံတည်ဆောက်ခြင်းကလည်း အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အားကစားအသင်းနဲ့၊ အားကစားသမားများကို နိုင်ငံတော်က ပံ့ပိုးမှုများစွာ ပြုလုပ်ပေးသလို၊ ပုဂ္ဂလိက စပွန်စာများစွာလည်း ရရှိအောင်...
Page 152 of 178«1...150151152153154...178»